Fanofana fiara ho an'ny Luxury Odisha | Vehivavy an-jatony
Fiara mivezivezy any Odisha
Ny fiaran-dalamby dia fitahiana amin'ny andro ahafahantsika mampiasa azy ireo amin'ny fahalalahana sy ny fahalalahana mivezivezy tahaka ny fiarantsika. Ny fialan-tsasatra & fialam-boly dia zava-dehibe ho an'ireo izay te hianatra sy hivoatra ankoatra ny mijanona ho salama. Ny fitsangatsanganana no loharano tsara indrindra hianarana amin'ny fotoana fialan-tsasatra; indrindra ho an'ny zanatsika, saingy tsy mbola mora tamin'ny Odisha mihitsy izany, raha Fiara mivezivezy any Odisha tsy ho nisy teo.
Sand Pebbles Tours no maso iraisam-pirenena manome serivisy fiofana fiara ao Odisha. Manao antoka isika fa ny fitsaboana rehetra dia atao amin'ny fikarakarana sy ny fahamendrehana. Ny zavatra niainanao niaraka tamintsika dia hanery anao hanao zavatra bebe kokoa hatrany rehefa manolotra fiara sy fiara-miasa an-trano-tsara indrindra ao Odisha. Manana fiaramanidina lehibe izahay amin'ny fanompoana ataonareo mba hifehezana ny faritanin'i Odisha. Ny fiara misy anay dia ampy tanteraka amin'ny zavatra rehetra izay mampiadana anao mandritra ny diany. Tsy voatery hisalasala ianao raha irery ianao na miaraka amin'ny vondrona mpinamana, na vondrona goavam-be na vondrona madinika, ary na inona na inona tranga mety hodiavintsika dia afaka mifaninana amin'ny paosintsika sy ny tsirony.
Fanofanana fiara amin'ny fiara mpitondra entana Odisha dia voafaritra etsy ambany: -
Sarin'ny fiara nitondra fiara sy mpanazatra AC
Fiara: Mercedes Benz, BMW, Fortuner, Corolla Altis, Honda City, Honda BRV ary mitovy.
Mpanazatra: 13, 19, 27, 41 & 45 seza maromaro voasokajy.
Vehivavy dia latsaky ny telo taona ary manana fitaovam-piarovana / Volo, Kitapo-tanana voalohany, rano Mineraly ary zavatra hafa tena ilaina.
Ny serivisy dia amin'ny 24 Hrs / 7 andro isan-kerinandro
Ny mpitaingina dia efa nahita fianarana, manana traikefa & manana finday ho an'ny fandrindrana.
Sand Pebbles no mpandraharaha ara-barotra ofisialy maro ao amin'ny tranoben'ny firenena sy ny firenena maro.
manontany anay / mifandray aminay